eParewa || Peace and Prosperity » ‘फोब्र्स इन्डिया’ म्यागजिनका अनुसार दीपिका भारतकी सबैभन्दा धेरै कमाउने कलाकारमा अग्रणी
‘फोब्र्स इन्डिया’ म्यागजिनका अनुसार दीपिका भारतकी सबैभन्दा धेरै कमाउने कलाकारमा अग्रणी
२०७५ पुस २१ गते शनिवार ०५:३६
अभिनेतृ दीपिका पादुकोण र उनका प्रेमी अभिनेता रणवीर सिंहबीच भर्खरै इटालीमा विवाह भयो । बिहेपछि भारत फर्किएर ५–६ वटा भोज आयोजना गरिसक्दा पनि उनीहरूको अनुहारबाट बिहेको चमक हटिसकेको छैन । दीपिकाको सिउँदोमा रातो सिन्दूर र हातमा चुरा...
अभिनेतृ दीपिका पादुकोण र उनका प्रेमी अभिनेता रणवीर सिंहबीच भर्खरै इटालीमा विवाह भयो । बिहेपछि भारत फर्किएर ५–६ वटा भोज आयोजना गरिसक्दा पनि उनीहरूको अनुहारबाट बिहेको चमक हटिसकेको छैन । दीपिकाको सिउँदोमा रातो सिन्दूर र हातमा चुरा छपक्कै छन्, घाँटीमा हीराजडित मंगलसूत्र लहराइरहेको छ । ‘फोब्र्स इन्डिया’ म्यागजिनका अनुसार दीपिका भारतकी सबैभन्दा धेरै कमाउने कलाकारमा अग्रणी छिन् । उनलाई एसियाकै ‘सेक्सी’ महिला पनि भनिन्छ । विवाहको तामझाम सकिएलगत्तै ‘नवभारत टाइम्स’ले दीपिकासँग रणवीर र उनको करियरलगायतका थुप्रै विषयमा कुराकानी गरेको थियो । यहाँ त्यसैको अनुदित सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ .
१) विवाहपछि तपाईंमा केही परिवर्तन आएको छ ?
एकदमै । हामी मानव जाति विवाहपछि धेरै सुरक्षित महसुस गर्छौं । जबसम्म डेटिङ गरिरहेका हुन्छौं, त्यतिबेला भविष्यमा के हुन्छ भनेर थाहै हुन्न । विवाहपछि एक–अर्काप्रति जिम्मेवारी महसुस हुन्छ । नोभेम्बर १४ मा (बिहेको दिन) रणवीरले मेरो हात समात्दा मलाई बिल्कुलै फरक महसुस भएको थियो । विवाहपछि मान्छेको व्यक्तित्वमा परिवर्तन आउने हुँदैन तर आफ्नो घर अरु कसैसँग बाँडिचुँडी गर्दा असाध्यै सन्तोष लाग्दो रहेछ । यो मामिलामा हामी दुवै परम्परावादी छौं । बिहेअघि हामी ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको रूपमा सँगै रहन्थ्यौं, छुट्टी मनाउँथ्यौं, घुम्थ्यौं, रमाउँथ्यौं र आ–आफ्नो घर फर्किन्थ्यौं । अब त्यस्तो छैन । बिहेपछि सँगै रहनु भनेको जिन्दगी सँगै बाँच्नु र खोज्नु हो । हामीले अहिले त्यही गरिरहेका छौं । जस्तोः अहिले म हाम्रो दैनिकी कस्तो हुन्छ भनेर जान्न खोजिरहेकी छु । साँझपख रणवीरलाई फोन गरेर ‘दिन कस्तो भयो ?’ भनी सोध्छु । ‘घर कतिखेर आउँछौ ?’ भनेर सोध्छु । ‘डिनरमा के खान्छौ ?’ भनेर सोध्छु । (मुसुमुसु हाँस्दै) यस्तो गर्न मलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ । धेरैजसो साथीहरू बिहेपछि घरबाट निस्कन व्यग्र भइरहेको सुनाउँथे तर म उल्टी छु । म सानै उमेरमा कामको लागि घरबाट निस्किएकी थिएँ । परिवारको न्यास्रोले छटपटाउँथें । रणवीर र मेरो डेटिङ हुँदा उनको परिवारसँग समय बिताउँथ्यौं । त्यसो नहुँदा बैंगलुरु बस्ने मेरा आमा–बुवाकहाँ जान्थ्यौं । बिहान उठ्दा साथमा कोही होओस्, जोसँग सुन्दर समय बिताउन पाइयोस्, नास्ता खाँदा ऊसँग कुरा गर्न सकियोस् । यी सब नहुँदा पछिल्ला १५ वर्ष म असाध्यै एक्ली थिएँ ।
२) रणवीरसँगको सम्बन्धअघि धेरै पटक तपाईंले सम्बन्ध गुमाउनुभयो । यसले तपाईंलाई कत्तिको प्रभाव पार्‍यो ?
हो, यसले मलाई प्रभाव पार्‍यो । तर, विवाहले सबै बदलिदिन्छ । यदि हामी कुनै पनि सम्बन्धमा शतप्रतिशत समर्पित हुन्छौं र त्यसका बाबजुद त्यो सम्बन्ध तोडिन्छ भने त्यसको छाप जिन्दगीभर रहिरहन्छ । रणवीरका लागि यो अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो तर उनलाई यो झेल्नु नै थियो । उनले त्यसलाई झेले पनि । यही कारण हामी सजिलैसँग त्यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कियौं । पुराना कुराले गर्दा म सुरक्षित महसुस गर्दिनथें तर मैले प्रेम गर्न छोडेकी थिइनँ । यस्तो बेला हामी अरु मान्छेका राम्रा काममा पनि शंका गर्न थाल्छौं । के–कस्ता घटनाले गर्दा यस्ती भएँ भनेर मैले रणवीरलाई धेरै सम्झाएँ । रणवीरले शान्त रहेर मलाई साथ दिँदै गए । हामीले एक–अर्काको जिन्दगीमा स्थिरता ल्याउन धेरै प्रयास ग¥यौं । मलाई धेरै पहिलेदेखि थाहा थियो कि मलाई सहज र स्थिर बनाउन तथा सुरक्षा दिन रणवीर योग्य व्यक्ति हुन् ।
३) तपाईं दुवैजना फरक प्रकृतिका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रणवीर चुलबुले प्रकारका छन्, तपाईं एकदमै शान्त हुनुहुन्छ …
(हाँस्दै) मान्छेलाई यो कुरा थाहा छैन— मसँग हुँदा रणवीर ध्यान गर्छन्, एकदमै शान्त रहन्छन् । म सोध्छु, “तिम्रो ऊर्जा कहाँ गयो ?” उनी भन्छन्, “बचाएर राखेको छु, एउटा इभेन्टमा जानुपर्ने छ, त्यहीँ खर्च गर्छु ।”
दुई घण्टामात्रै सुतेर पनि उनी कुनै रियालिटी शोमा जान्छन्, त्यहाँ पनि आफ्नो शतप्रतिशत दिन्छन् । घर फर्किएपछि रमाइलो गर्छन् । सँगै खेल्छन्, सँगै खान्छन् । कतिपटक हामी बिलकुल चुपचाप हुन्छौं । रणवीर एकदमै तेज र विद्वान छन् । धेरै सोचविचार गरेर निर्णय लिन्छन् । उनलाई थाहा छ कि अब करियरमा के गर्नुपर्छ ।
४) त्यसोभए रिमोट कन्ट्रोल कोसँग छ ?
(हाँस्दै) मसँग । उनलाई सोध्नुभयो भने पनि यही उत्तर दिन्छन् ।
५) तपाईंलाई रणवीरको फोनको पासवर्ड पनि थाहा होला हैन ? कहिल्यै फोन चेक गर्नुभएको छ ?
उम्मम… नाइँ । मलाई यस्तो गर्नु जरुरी छैन ।
६) रणवीरका अनुसार विवाहको सम्पूर्ण काम तपाईंले नै हेर्नुभएको थियो । बिहेबारे पहिलोपटक कहिले सोच्नुभयो ?
म ५ वर्षकी हुँदा । हरेक युवती यस्तो सपना देख्छन् । त्यो फेन्टासीजस्तै हो । तर, मैले ‘पद्मावत’पछि ठानेकी थिएँ कि अब बिहे गर्नुपर्छ । फिल्म प्रदर्शन त भयो तर रणवीरलाई अरू काम सिध्याउनु थियो । उनीसँग बिहेको तयारी गर्ने समय थिएन, त्यसैले मैले परिवारसँग मिलेर सबै काम गरें ।
७) रणवीरको परिवारसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ ?
एकदमै गज्जब । उनका बुवाका लागि म छोरी हुँ, आमाका लागि साथी । उहाँसँग म जसरी पनि कुरा गर्न सक्छु । उहाँहरू अब मेरा पनि आमा–बुवा हुनुहुन्छ, मेरो परिवार हुनुहुन्छ । बुवा अलि भावुक हुनुहुन्छ । आमा भने मजबुत हुनुहुन्छ । बिहान ८ बजेसम्म पार्टी गर्न सक्नुहुन्छ ।
८) विवाहको बारेमा यस्तो केही छ, जुन हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन ?
मान्छेहरू भन्दै थिए— विवाहका तस्बिरहरू जादुयी छन् । हुन पनि थिए । विवाह पनि जादुयी थियो । हाम्रो बिहेका बेला इटालीमा पानी परिरहेको थियो । १३ नोभेम्बरमा मेरो मेहन्दी थियो, ठीक त्यही बेला घाम लाग्यो । आकाश नीलो देखिन थाल्यो । हामीलाई १३, १४ र १५ तारिखमा नीलो आकाश चाहिएको थियो, त्यस्तै भयो । १६ तारिखमा मान्छेहरू घर फर्किदै थिए, फेरि पानी पर्न शुरु ग¥यो । योचाहिँ एक किसिमको जादू नै थियो ।
९) बिहेका केही तस्बिर तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसबाहेक कसैले केही देख्न पाएनन् । यसरी लुकाउनु जरुरी थियो ?
प्राइभेसी दोस्रो नम्बरमा आउँछ । हामीले अतिथिहरूलाई मोबाइल ल्याउन यसकारण मनाही गरेका थियौं कि हामी त्यो क्षण बाँच्न सकौं । त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यसलाई महसुस गर्न सकौं । नत्र त उनीहरू मोबाइलमा फोटो, भिडियो लिन व्यस्त हुन्थे । मोबाइल नभएपछि सबैले बिहेको आनन्द लिए ।
१०) बिहेको त्यस्तो कुनै सम्झना छ, जुन सधैं साथ रहिरहन्छ ?
एकदमै धेरै छन् । विशेषगरी त्यतिबेला, जतिबेला आमाले कन्यादान गर्दै हुनुहुन्थ्यो । रणवीर र मलाई घाम असाध्यै मन पर्छ । मेहन्दीको बेला पनि घाम लागिदियो । लाग्छ— रणवीर र मेरो घामसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध छ । सबै सोचेजस्तै शतप्रतिशत थियो । १५ नोभेम्बरमा बिहेका सम्पूर्ण काम सकिएपछि रणवीर र मलाई होटल फर्किनु थियो । घाम अस्ताउँदै थियो र हाम्रो बिहेको काम पनि सकिएको थियो । त्यतिबेला हाम्रो फेबरेट गीत सुनिरहेका थियौं । मलाई त्यो सम्पूर्ण क्षण झलझली याद आइरहन्छ ।
११) तपाईं एसियाका ‘५० सेक्सी महिला’को सूचीमा अग्रणी हुनुहुन्छ । यसले तपाईंको जिन्दगीमा के फरक पार्छ ?
म यसो पनि भन्दिनँ कि यसले मलाई खुशी भएन । तर, यसले मेरो जिन्दगीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । यौनिकता र मादकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । हामीलाई लाग्छ कि ‘सेक्सी’ भनिनुले गलत ट्याग लागेको छ, तर यो शारीरिक कुरामात्रै होइन । यो मस्तिष्कसँग पनि जोडिएको र आत्मिक हुन्छ । यो व्यक्तित्वको कुरा हो । जहाँसम्म ‘सेक्सी’ ट्यागको कुरा छ, ठीकै छ, राम्रै लागेको छ । तर, मेरो जिन्दगीलाई यसले बाँध्न सक्दैन ।
१२) त्यसका अतिरिक्त तपाईं सबैभन्दा धेरै कमाउने भारतीय कलाकार पनि हुनुहुन्छ नि । कस्तो लाग्छ ?
यो कुरा सुनेर म उत्साहित हुन्छु । विशेषगरी आफ्नो पारिश्रमिकलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाइएको हुन्छ । मलाई खुशी छ कि यो समाचार बाहिर आयो । मलाई यसमा गर्व छ । मैले आफ्नो मेहनतले कमाएकी हुँ, कसैसँग मागेकी होइन ।
१३) तपाईंले पुरुष कलाकारभन्दा पनि धेरै कमाइरहनुभएको छ । यसले बाँकी अभिनेतृलाई बल मिल्छ होला कि नाइ ?
अवश्य मिल्छ । म अक्सर काममा यसकारण दत्तचित्त भएर लाग्छु कि मेरो कारणले कति मान्छेलाई पैसा प्राप्त हुन्छ । म कुनै फिल्म, विज्ञापन या कुनै इभेन्टका लागि ‘नाइ’ भन्न सक्ने आत्मविश्वास राख्छु । यो मैले आफ्नो लागि मात्रै गरेकी होइन । आउने पिँढीले यो बाटो पछ्याओस् भनेर मैले त्यत्रो आँट गर्न सकेकी हुन्छु । कसै न कसैले त बाटो बनाउनै पर्छ । मलाई खुशी यस मानेमा लाग्छ कि त्यो बाटो बनाउने काममा म पनि लागिपरेकी छु ।
१४) यही कारण हो त तपाईंले दुई वर्षमा एउटा पनि फिल्म नगर्नुभएको ?
होइन । फिल्मको कुरा हो भने म मनको सुन्छु । काम गर्नुभन्दा सिर्जनात्मक मलाई अरू केही लाग्दैन । मैले एकैपटक चार वटा फिल्ममा पनि काम गरेकी छु । तर, ती सबै एकदमै क्रियटिभ फिल्म थिए ।
१५) राम्रो फिल्म पाउनुभयो भने पारिश्रमिक घटाउनु पनि हुन्छ ?
हुन सक्छ । सँगै काम गर्ने पुरुष कलाकारले पाउने पारिश्रमिकमा यो निर्भर हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, कसलाई कति र किन प्राप्त भइरहेको छ ! सुपरस्टार खानहरू, भर्खर–भर्खर आएका रणवीर सिंह÷कपुर, वरुण धवनसँग म कति काम गर्न सक्छु— मलाई राम्ररी थाहा छ । म कुन धरातलमा उभिएकी छु, त्यो पनि थाहा छ । निर्माण लागत कति हुन्छ, त्यो पनि मलाई थाहा हुन्छ । फिल्मको एउटा हिस्साबाटै निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने म एक पैसा पनि लिन्नँ । तर, पुरुष कलाकारलाई धेरै दिनका लागि मलाई थोरै दिने सन्दर्भमा म स्वीकार गर्दिनँ । रणवीर कपुरलाई फिल्ममा लिनु छ र उनलाई राम्रो पारिश्रमिक दिनु छ भने मेरो पारिश्रमिक उनीभन्दा कम किन हुनू ? म बराबर माग्छु ।
१६) तपाईंले फिल्म निर्माणमा पनि हात हाल्नुभयो । पहिलो काम नै मेघना गुलजारसँग गर्दै हुनुहुन्छ । मेघनासँग काम गर्न कसरी प्रेरित हुनुभयो ?
मेरो टिमले थुप्रै पटक मेघनाका फिल्मबारे सुनाएका थिए । मेघनालाई मैले उनीसँग काम गर्दिनँ भन्ने लाग्दो रहेछ । म स्वयं उनीसँग भेट्न चाहन्थें तर विभिन्न कारणले त्यो सम्भव भएको थिएन । मलाई जुन सिन सुनाइयो, त्यो सुनेपछि मलाई मेघनाको फिल्ममा काम गर्न मन लाग्यो । मैले आफूलाई त्यससँग जोडिएको पाएँ । यो स्क्रिप्टको मात्रै कुरा होइन, निर्देशकसँग पनि उत्तिकै जोडिएको हुनुपर्छ । मैले बनाउन लागेको फिल्म एसिड आक्रमणका पीडितबारे हो ।
१७) तपाईंलाई निर्माता बन्ने प्रेरणा कहाँबाट आयो ? निर्माण गृहको नाम के राख्दै हुनुहुन्छ ?
फिल्मको विषयले हो । यो एसिड पीडितको कथा हो । म यस्तो फिल्म बनाउन चाहन्थें, जसका पात्रलाई एउटा प्लेटफर्मको आवश्यकता छ, जहाँबाट आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नु छ । लक्ष्मी अग्रवाल (भारतको ‘स्टप एसिड अट्याक’ अभियानकी अभियन्ता)जीको अभियानले म प्रभावित छु । मलाई थाहा छैन— यसपछि अर्को फिल्म निर्माण गर्छु या गर्दिनँ । मेरो निर्माण गृहको नाम पनि छैन । नाम राखें भने ‘का’ राख्छु । यो इजिप्सियन शब्द हो, जसको अर्थ आत्मा हो ।
१८) फेरि विवाहतिरै जाऊँ । हामी त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका हौं, जहाँ कुनै पनि अभिनेतृ विवाहित हुनुले बक्स–अफिसमा असर पार्दैन ?
आशा गर्न सक्छौं । मलाई लाग्छ— योभन्दा अघि पनि बक्स–अफिसको निर्णय हुन्थेन । यदि अभिनेतृ विहेपछि काम गर्न चाहँदैनन् भने यो त उनीहरूको फैसला हो, बक्स–अफिसको होइन ।
१९) प्रियंका चोपडाको विहेलगत्तै तपाईंले गर्नुभयो । केही भन्नुहुन्छ यसमा ?
प्रियंकाले पनि सम्बन्धमा स्थिरता चाहन्थिन् । म निकलाई चिन्दिनँ तर यत्ति भन्न सक्छु कि अब प्रियंका सेटल भइन् । म प्रियंकालाई जति चिन्छु, त्यसका आधारमा मलाई लाग्छ— उनलाई स्थायी प्रेम आवश्यक थियो । म प्रियंकाको बारेमा खुशी किन पनि छु भने उनले आफूलाई शतप्रतिशत माया गर्ने प्रेमी पाएकी छन् ।
प्रकाशित मिति २०७५ पुस २१ गते शनिवार ०५:३६